व्यवसायले महिलालाई देखाएको आत्मनिर्भरताको बाटो - Sadarline
अध्यक्ष कप प्रतियोगितामा जयकिसान प्रथम
व्यवसायले महिलालाई देखाएको आत्मनिर्भरताको बाटो
सदरलाइन संवाददाता । २२ असार २०७७, सोमबार १६:४२
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–५ की खुमा आचार्यको दैनिकी हिजोआज घरधन्दामा मात्रै सीमित छैन । गृहणीको रुपमा दिन विताउदै आएकी खुमाको परिचय अहिले कटाई सिलाई सिकाउने प्रशिक्षकका रुपमा फेरिएको छ । उनको दिनचर्या अहिले यसरी नै वित्ने गरेको छ । उनले आफुले जानेको सिप अन्य महिलालाई पनि बाँड्दैछिन् ।
उनको विगत केलाउने हो भने सहजताका पानाहरु भेटिन मुस्किल नै पर्छ । १० कक्षामा पढ्दै गर्दा १६ बर्षमा मागी विहे भयो । परिवारको आँखा अगाडि त्यसै वस्न् मनले मानेन । ‘विहान वेलुका घरधन्दा, चुलोचौका मात्रै हो र छोरीले गर्ने ? भन्ने लाग्न थाल्यो’–खुमा भन्छिन्–‘मैले ९ कक्षासम्म पढेकी थिए । पढाई राम्रो भएन । चुला र चौकामा मात्रै सिमित भयँ भने भविष्य के होला ? सोच्न थालें । यहि कुराले मलाई पिरोल्न थाल्यो । अनि घरमा जसोतसो हिम्मत जुटाएर कुरा गरे र कटाई सिलाई तालिम लिए ।’
अहिले उनी कटाई सिलाई तालिममा प्रशिक्षक भएर सिप सिकाईरहेकी छन् । करिब २ बर्ष अघि उनले सिलाईकटाई सम्बन्धित सीप सिकेकी थिईन । निरन्तरको मेहनत र लगावले उनी २ वर्षमै अरुलाई तालिम दिन सक्ने भईन् । उनले सिकेको सीपले उनलाई अहिले गरिखाने सुन्दर बाटो देखाईदिएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका दशविगाहाकी सानु गौतमले २० वर्षमै ‘ब्युटिसियन’ सम्बन्धी सीप सिकीन् । ५ बर्ष अघि उनले सीप मात्रै सिकीनन् आफ्नो लागि उनले आत्मनिर्भरताको बाटो पनि बनाईन् । अविवाहित सानुको आफैले कमाएको रुपैयाँले विहे गर्ने रहर छ ।
‘अहिले म मा आत्मविश्वास बढेको छ । दक्षतामा पनि अभिवृद्धि भएको छ । आफ्नै पार्लर खोलेकी छु’–२५ बर्षकी सानु भन्छिन्–‘मेरो ५ बर्षको व्यवसायीक अनुभवमा धेरै कुरा सिक्न पायँ । सिपले समृद्धिको बाटो तय गरिदिन्छ । त्यसमा निरन्तर यात्रा गर्ने भनेको आँफैले हो । समस्या हरेक दिन आँउछन् । तर समस्याबाट पर भाग्नु हुँदैन । सामना गर्न सक्नु पर्छ । समस्यासंग जुध्दै अगाडि बढ्न सकेमात्रै सफल भईन्छ ।’
नेपालगञ्जकी गंगा लम्सालले चिया पसल गर्न थालेको १६ वर्ष भयो । पसल गरेरै उनले २ वटा सन्तान हुर्काईन् । समय दिन सके व्यवसायी जीवन एकदमै राम्रो हुने ५७ बर्षकी गंगा बताउछिन् । आज भन्दा करिब १६ बर्ष अघि चिया पसल सुरु गर्दा त्यतिखेर महिला व्यावसायीलाई सहज वातावरण नभएको अनुभव उनी सुनाउछिन ।
‘अहिलेको जस्तो उतिबेला कहाँ थियो र ? चिया बेच्ने काम एकदमै गए गुज्रेको काम हो भन्ने ठानिन्थ्यो । तर म अरु भन्दा अलग थिए । उनी भन्छिन्, मलाई अरुको कुराले खासै फरक परेन । त्यसैले म अहिले प्रतिष्ठित सामाजिक जीवन जिउदै छु ।’
पछिल्लो समय सानु, गंगा र खुमा जस्ता धेरै महिलाहरु आफु र आफ्नो परिवारका लागि आफै व्यवसाय गर्न थालेका छन् । सरकारले सहुलियत करको व्यवस्था गरेको छ । छ तर लिन नजानेको अवस्था छ । सहजिकरणको आवस्यकता छ । तर पनि महिला व्यवसायी बढेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महाँसंघका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर कमिटी अध्यक्ष रचना श्रेष्ठ बताउछिन । ‘पहिले महिला व्यवसायी कम थिए अहिले बाँकेमा २५ प्रतिशत जति उद्यमी महिला छन्,’ उनले भनिन् । महिलाहरु अहिले तरकारी खेतिदेखि लिएर ठुल्ठुला उद्योग पनि महिलाले सन्चालन गरि रहेका छन् ।
२२ असार २०७७, सोमबार १६:४२
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज : नेपालमा कोरोनाको ग्राफ बढ्दै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय ८० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । १ सय ८० जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या १५ हजार ९ सय ६४ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२८ असार २०७४, बुधबार १७:४१
१० बैशाख २०७६, मंगलवार १८:५१
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार २२:५७